Arbacada, Maarso 18, 2015 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Waxaan ka wareysanay Scott Brinker wax ku saabsan Shirkiisa Teknolojiyada Suuqgeynta ee soo socota, Martech. Mid ka mid ah waxyaabihii aan ka wada hadlay waxay ahayd tirada ganacsiyada ee aan geyn istiraatiijiyad maxaa yeelay istaraatiijiyadooda hadda ayaa shaqeysa. Shaki iigama jiro in shirkadaha leh, tusaale ahaan, eray weyn oo ah macaamiisha afka, ay yeelan karaan ganacsi koraya oo barwaaqo ah. Laakiin taasi micnaheedu maahan istaraatiijiyad suuq geyn dijitaal ah inaysan ka caawin doonin iyaga. Istaraatijiyad suuq geyn dijitaal ah ayaa ka caawin karta rajadooda cilmi baarista